ငုံးဥ ၁၂ လုံး (ပြုတ်ထားပြီး အခွံခွာထားပါ)
Quail egg 12 no (boil and peel)
အာလူး ၂ လုံး (အခွံခွာပြီး အတုံးသေးလေးတွေတုံးထားပါ)
Potato2no (peel and cut small pieces)
ဆား တစ်ဝက် ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ပင်စိမ်း ၃ ပင် (ကြမ်းကြမ်းလေး ဖြတ်ထားပါ)
Basil3bunch (roughly choppen)
ဟင်းအနှစ်လုပ်၇န် ပါဝင်ပစ္စည်း (curry paste ingredients)
ငပိစိမ်းစား ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ ၂ လုံး
ချင်း ဇွန်း တစ်ဝက် လက်ဖက်ဇွန်း
ဆနွင်းမှုန့် ဇွန်း တစ်ဝက် လက်ဖက်ဇွန်း
ငရုတ်သီးခြောက် ၈ တောင့်
Dried chili 8 no
အရောင်တင်မှုန့် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် ၁ ဇွန်း ခွဲ လက်ဖက်ဇွန်း
Chicken powder 1 ½ tsp
အသီးအရွက်ဆီ ၂ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ခရမ်းချဉ်သီး ၂ လုံး ( ခတ်ကြမ်းကြမ်းလေး တွေ လှီးထားပါ)
Tomato2no (roughly chopped)
၁။ ဟင်းအနှစ်လုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံး ကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်ပါ။
1.Blean all curry paste ingredients.
၂။ စောက်နက် အိုး ထဲမှာ ဆီပူ အောင် တည်ပါ။ ဆီပူလာလျှင် ငပိ ကို အရင်မွှေးအောင် ဆီသတ်ပါ ပြီးမှ ဟင်းအနှစ်များ ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနံ့သင်းမွှေးလာ လျှင် အာလူးတုံးများ ထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပါ။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ မီး အနေတော်လောက်နဲ့၅ မိနစ်လောက်တည်ပါ။
2.In deep pan heat oil. Fried the shrimp paste first until fragrant. Add all curry paste and cook until golden brown and fragrant. Add potato pieces and little bit of water. Cook with medium heat for5minutes.
၃ ။ အာလူး အနည်းငယ် နူးလျင် ငုံးဥများနှင့် ဆား ထည့်ပြီး ဆီကျန် ရေကျန် လာသည် အထိတည်ပါ။ ဆား မြည်းပြီး လိုတာထပ်ထည့်ပါ။ မီးဖိုပေါ်ကမချခင် ပင်စိမ်း အုပ်ပါ။ အသင့်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီး။
3.Add quail egg and salt when potato pieces are soft. Cook till oil and water reduce to the same. Tatse and add what needed. Before off the heat add basil. Ready to serve.